Resaky ny mpitsimpona akotry : fandrahonana mifamaly | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fandrahonana mifamaly
Par Les Nouvelles sur 09/02/2016
Iza moa no tsy mahafantatra fa ry zareo mpilalao pôlitika no mila izany fampihavanana izany? Fitapitaka fotsiny ny filazana izany hoe fampihavanam-pirenena izany. Efa nilaozan’ny vahoaka izany fisaratsarahana izany, na noho ny anton’ny fiaviana ara-paritra, na noho ny fahasamihafàna ara-pinoana, na noho ny tsy fitovian’ny hevitra pôlitika, nampiray hina azy ny fiarahana misedra fahasahiranana iombonana.
Ireo olona mitolona na mifampitolona ao amin’ny sehatra pôlitika no hany tazany misara-bazana, mifanaikitra na mifamandrika amin’izao karazana fitapitaka rehetra izao. Ny andaniny moa dia miaina ao anatin’ny tebiteby lalandava, miahiahy tsy misy fitsaharana izany fanakorontanana fanozongozonana izany, ny ankilany indray dia tsy menatra intsony eo amin’ny fampisehoana ny tsy fahandrasan-tantana, miandry kitapo latsaka, manantena kendry tohina, ary maneho fahavononana mihitsy aza amporisika sy anararaotra ny fitrangana fahasahiranana eo amin’ny fitondrana. Izany toe-piainana tsy andrian’ny fitoniana izany dia tsy ahavanona ny asa aman-draharaha.
Ireo olona ireo anefa dia tsy hita ho ampihavanana, fifaninanana manompo fifandrafesana no hany kapoakan’izy ireo, fotoana very maina no harena lany tsy hamokatra no entina hampihavanana azy. Raha jerena ny fitrangan-draharaha amin’izao fotoana izao, moa ve tsy ireo londohan’ny mpisorona mivohy izany fampihavanana izany indrindra no mifandranitra na mifandrangotra mihitsy aza. Tsy misy intsony izany fahamenarana izany, samy mandeha samy mifamingana, ny namana omaly fahavalo anio, ny mpiray dia androany mpikarama hamadika rahampitso. Mihena isan’andro izany lazaina hoe soatoavina izany eo amin’ny fiarahamonina eo amin’ny sehatra pôlitika. Rivotra iainana taza-maso izany. Hany fanafody dia ny fampiharana amin’ny fomba hentitra ireo fitsipika miaro ny tsy fanotàna fady. Tsy izany anefa no lalana ombàna, mbola ny fanamelohana tsy ara-drariny no hany tetika, ary sedran’izany ny famelan-keloka. Mifangaroharo ao ny heloka sy ny fanetsehan-keloka, hany vokatr’izany dia lasa samy tsy maty manota. Mbola tsy miova amin’izany ny toe-tsaina mibahana, mihisatra ny fijoroana mahefan’ny Fitsarana Ambony momba ny fiampangana ny tompom-pahefana ambony.